ဆက်သွယ်ရေး | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဆက်သွယ်ရေး
ထရေးဒင်း www စတိုင်. ပိုက်ကွန်အပေါ်သာယာဝပြောဖို့ရန်အတင့်တယ်သောအဆုံးမဲ့လမ်းဆင်း၏သူတို့အားများစွာသောနာရီကနေတချို့ကထိုးထွင်းသိမြင်မှု
အင်တာဗျူးကာလအတွင်းကျွမ်းကျင်မှုအလေးပေးအပေါငျးတို့သညျအခွားအလုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထံမှသင်တို့ကွဲပြားခြားနားသောစေသည်ဘာအလုပ်ရှင်ပြသနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်. ဒီယှဉ်ပြိုင်မှုကမ်ဘာပျေါတှငျ, ကုမ္ပဏီများကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ကျွမ်းကျင်မှုအလေးချိန်နှင့်သူတို့ကုမ္ပဏီအကျိုးရှိမည်ဟုဘယ်လောက်အဆုံးအဖြတ်အားဖြင့်အများဆုံးအရည်အချင်းပြည့်မီန်ထမ်းများအတွက်ရှာဖွေ. ထိပ်ကုမ္ပဏီအများစုမှထွက်သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကနေအခြေပြုရပ်တည်သူကိုအလုပ်ရှင်များကိုရှာ, အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပေးနိုင်စွမ်း, နှင့် org မြှင့်တင်ရန်မယ်လို့နှစ်သက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ...
အခုဆိုရင်သင်ဟာအလွန်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာစောင်ရေအတွက်ချပြီးပါလိမ့်မည်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်နှင့်လတ်ဆတ်သော web site ကိုရှိသည်, သငျသညျယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တဆင့်စျေးကွက်အပေါ်ကြီးမားတဲ့စှဲစေရန်ဤ site ကိုကြော်ငြာတာဖြစ်ပါတယ်. ဘယ်လိုတဦးတည်းအနေနဲ့ခါနီး site ကိုမိတ်ဆက်များအတွက်ခိုင်မာသောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရေးသားခြင်းလည်ဘူး? သငျသညျဤအကွောငျးကိုသွားကြဖို့ကိုဘယ်လိုအပေါ်မသေချာလျှင်သင်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်, သို့သော်သင်စတင်ရန်အနည်းငယ်အကြံပြုချက်များရှိပါတယ်, ဒီနေရာမှာအတိတ်ကာလအောင်မြင်သောပါပြီအချို့ရှိပါတယ်. ပြန်လည်...
နောက်ထပ် Customer များရယူခြင်း
စစ်တမ်းများကြောင်းပြသ 85% အသက်တာ၌အောင်မြင်မှုကသင်၏ဆက်သွယ်မှုမှပြောပြတယ်, လူ့ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှု, နှင့် "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်. ဂျိုး Batten, အမေရိကန်စိတ်ခွန်အားနိုးစပီကာကဆိုပါတယ်: "သင်ပြောပြခင်မှာ, မေးမြန်း; သငျသညျစကားပြောရန်မတိုင်မီ, နားထောင်; သငျသညျနားမထောငျအပြီး, ပွောဆို; အမြဲတမ်းသင်ဂရုမစိုက်ကြောင်းပြသ. သငျသညျစောငျ့ရှောကျမှုဘာသာပြန်ဆိုနိုင်တဲ့အခါ, လူတွေကိုသင်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့နဲ့အသေးစိတျလမျး၌မရကြလိမ့်မည်လိုခငျြပါလိမ့်မယ်။" စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှုထောငျ့မှသင်တို့သည်လည်းဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များရရန်ရှိသည် ...
အင်တာနက်ကိုရှိပါတယ်, ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမပါဘဲ, ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများနှင့်မီဒီယာနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအကြားပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်မှုပေးအပ်. သို့သော်, ဒါဟာမီဒီယာရိုးရှင်းစွာတက်မစောငျ့နိုငျသောအဘို့စာနယ်ဇင်းလွှတ်ပေးတစ်ခုတိုကျခိုကျမှုကိုလည်းအားပေးခဲ့. ဆိုလိုတာက, မင်းဘဲ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတစ်ဦးကိုသူတို့ပုံရှံ့ပွော့ပုံမှတစ်ဆင့်ထွန်းလင်းကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုစာနယ်ဇင်းထုတ်ကယ်ယူရမယ်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင့်ပစ်မှတ်အယ်ဒီတာများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများရောက်ရှိဘို့ပိုကောင်းတဲ့ချဉ်းကပ်နည်းကိုရှာဖွေ. အလွန်တူညီ reas ဘို့ ...
တစ်ဦး Call Center ကယောဘရှာဖွေခြင်း
31 ကမ်းလွန်အိုင်တီ Outsourcing စာချုပ်များအတွက်အန္တရာယ်: သို့မဟုတ်ကတိဝယ်ယူ
MySpace အင်တာနက်အကြီးမားဆုံးကို un-ပုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. 75 သန်းပေါင်းအသုံးပြုသူများသည်, 15 သန်းနေ့စဉ်ထူးခြားတဲ့ login, 240,000 တစ်နေ့လျှင်သစ်ကိုအသုံးပြုသူများသည်, နီးပါး 30 ဘီလီယံခန့်ကိုလစဉ်စာမျက်နှာအမြင်များ - လှောက် 10,593 တစ်စက္ကန့်စာမကျြနှာအမြင်များ.
တစ်ဦးကစျေးကွက် Plan ကိုတစ်ဦးကဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းကဲ့သို့တူညီသောအရာဖြစ်ပါသည်?
ဘယ်လိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်ဆက်စပ်ပါဘူး? ခြားနားချက်များဘာတွေလဲ? အဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်၏ရုံတစျခုအသှငျအပွငျ Is? တဦးတည်းတစ်ခုတည်းစာရွက်စာတမ်းသို့သူတို့ကိုငါပေါင်းစပ်ပြီးစဉ်းစားသင့်?
အီလက်ထရောနစ် Directory ကို – ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့တစ်ဦးကဟန်ပြ
In the last4အနှစ်, internet access has almost doubled. Why not take advantage of this momentum?
နယူးဝန်ထမ်းရေးရာတစ်ဦးကလုံခြုံမှုအန္တရာယ် Be နိုင်သလား
မူလစာမျက်နှာမှာ data ကို Entry 'လုပ်ငန်း
ငါဖြစ်ကောင်းမူလစာမျက်နှာမှာဒေတာများကို Entry 'လုပ်ငန်းခွင်အဘို့အကြှနျုပျ၏ကို web site ပေါ်တွင်အများဆုံးတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိ. စျေးကွက်အရပျ၏ဤအပိုင်းအပေါင်းတို့၏ပိုမိုလူကြိုက်များဖြစ်ဟန်. ငါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာနှစ်ခုသည်ယုံကြည်. တဝင်ငွေအလားအလာနှင့်ဒုတိယဖြစ်ပါသည်လူအများစုသူတို့လိုအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်ဖျော်ဖြေဖို့ပြီးသားကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် tools တွေရှိတယ်ခံစားရဖြစ်ပါသည်.
တစ်ဦးယောဘသည်များအတွက်တိုက်ပွဲကွန်ယက်အဖွဲ့များနှင့် Professional ကကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအပေါ်မူတည်
ဤဆောင်းပါးသည်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအရေးအသားဝန်ဆောင်မှုပြေးသူကိုရှင်ပေါလု Freiberger ကရေးသားခဲ့သည်. ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အလားအလာအလုပ်ရှင်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရဖို့အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုအမျိုးမျိုးသောနည်းပရိယာယ်ကိုဖော်ပြထားတယ်.
သစ္စာရှိမှုစျေးကွက်များမှတဆင့်သင့်ရဲ့ Customer များ Keeping
မယုံနိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနောက်ကွယ်မှအကောင်းဆုံးထားရှိမည်လျှို့ဝှက်ချက်အတိအကျကဘာလဲ? ထိုသို့ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်? သင့်ကုမ္ပဏီအစွန်အဖျားထိပ်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည်သေချာအောင်လိမ့်မည်ဟုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လုပ်သားအင်အားထားရှိခြင်း? ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသင်၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသာပြန်သင်သွားအပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်မည်မဟုတ်သူတစ်ဦးသစ္စာစောင့်သိ client ကိုအခြေစိုက်စခန်းရှိခြင်း? သစ္စာစောင့်သိ clients များကိုလည်းသင့်ကုမ္ပဏီခံတွင်း၏ကောင်းသောစကားလုံးကတဆင့်အခြားလူများအနေဖြင့်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရကူညီပေးပါမည်သူများမှာ. ဤသည်အောင်မြင်မှု၏အဘယ်ကြောင့်အများကြီးဖြစ်ပါတယ် ...
ပြည်သူ့ကိုသင်နားထောင်ပါကတစျခု Little ကလျှို့ဝှက်ချက်
ကလူထံမှတုံ့ပြန်ချက်ရရှိရန်ခက်ခဲဒါဟာင်, ဒါပေမယ့်တက်ကြွစွာဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်နားထောင်ခြင်းနဲ့တူဘာမှမရှိဘူးင်, အရာယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်, အရာထို့နောက်ဆက်သွယ်ရေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်, နောက်ဆုံးမှာ, ရောင်းအား.
ကော်ပိုရိတ်အထောက်အထားနျ Standard ပေါင်းစပ်
ဈေးကွက်ထဲမှာတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းတစ်ဦးရာထူးယှဉ်ပြိုင်နေသည် - ဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအလွန်အမင်းသိသာနှင့်မှတ်မိစေမည်တဲ့အနေအထား. ကော်ပိုရိတ်ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ခေါ်ဆိုခအမှန်ပင်သင်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်ချဉ်းကပ်နည်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအစစနစ်တကျအနေအထားထွက်အလုပ်လုပ်ခင်းပါလိမ့်မယ်, ထိထိရောက်ရောက်နှင့်တသမတ်တည်းသင့်ရဲ့အမြင်အာရုံဆက်သွယ်ရေးမှကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်သင့်ကော်ပိုရိတ်လိုဂိုဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်.
Does your company have an email policy? Did you even know there was suchathing? ကောင်းစွာ, there is, and if your company doesn't have one you are not only risking the professional image of your firm, but also risking potential liability issues that may arise from the misuse of your company email system. Havingapublished email policy accomplishes three objectives. ပဌမ, it teaches your employees how to use email inaprofessional manner. What's that? You've never really ...
Tandon Group မှ EMS ကမ်းလှမ်း, အိုင်တီန်ဆောင်မှုများ, ကြိုးမဲ့ applications များ, software development န်ဆောင်မှုများ. အမျိုးမျိုးသော domains များဖို့သူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့န်ဆောင်မှုပေးသည့်ကုမ္ပဏီများ၎င်း၏အုပ်စုသည်. ဒါဟာကာကွယ်ရေး applications များပါဝင်သည်, ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး, နည်းပညာကို, အိုင်တီန်ဆောင်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ, RFID ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, Outsourcing န်ဆောင်မှုများ.
Proper sales training is crucial for the success of any business! The efficiency of your sales depends on various interrelated factors such as the efficiency and the skills of your business members, the ability of your company to create and explore new sales opportunities, as well as the ability to close potential sales. ဖြည့်စွက်ကာ,aproper customer relationship management can maintain the clients' interest in the products or services offered by your business. Considering the fact that the profitability ofacompany is determined by its members' relations with clients,asuccessful business should focus on better understanding customers' needs, enhancing the communication with clients by providing good feed-back and also on improving interactions with clients. With the means of effective sales training programs, you will be able to strengthen the relations between clients and the members of your business.
သင့်ရဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်: How To “Weather” မဆိုမုန်တိုင်း
Day in and day out, people judge you and your business. Rightly or wrongly, they make impressions. These impressions greatly affect your business and its growth. ထို့ကြောင့်, there is no better way to carry on with your business than to createapositive and lasting impression.
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမိုဘိုင်းဈေးကွက် Corps. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်
တစ်ဦးက Business ဖုန်းစနစ်၏ဝယ်ယူကိုင်တွယ်ခြင်း
Purchasingabusiness phone system is not an easy endeavor, but with the right mind set andalittle knowledge about business telephones, you can findaviable, budget friendly solution to your business' communication needs. One of the first decisions you will need to make is whether or not to go withakey system oraPrivate Branch Exchange (PBX) စံနစ်. Depending on how many individual stations you need and how rapidly you expect your company to grow, one of these two options should fit the bill.
တစ်ဦးသည် SAP FI / CO အထူးကုသို့မဟုတ်အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်အလုပ်ရယူခြင်း
အင်ဂျင်နီယာယောဘသည်သတင်း: ကမ်းလွန် Outsourcing ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့သိကောင်းစရာများ
The cheap labor costs of Southeast Asia are likeasiren call to more and more US employers seeking to lower support costs and improve profits. The increasingly common trend toward outsourcing labor to countries such as India, မလေးရှား, and Pakistan means jobs are leaking toapart of the world where workers fresh out of college or technical school will work for pennies on the dollar compared to American workers. For the American workers, that means the bar for entry-level po...
Grow revenue and increase profits withalarger sales force. အိုကေ, it's not that easy. And there's no guarantee you'll become more profitable. But if you takeacareful approach, you can find the right people to take your business to the next level.
Shine မှနောက်ထပ်ချန့်စ ‘ အဆိုပါမေးမြန်းချက်အပေါ် Up ကိုအောက်ပါ
R'sum’ စာအရေးအသား – ဘုံအမှားနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်
How to avoid the mistakes which will send your r'sum' straight to the shredder. Learn how to target your r'sum' for the job you really want.
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Differential စျေးနှုန်း
According to IMS Health, poor countries are projected to account for less than one quarter of pharmaceutical sales in 2002. Of every $100 spent on medicines worldwide - 42 are in the USA, 25 in Europe, 11 in Japan, 7.5 in Latin America and the Caribbean,5in China and South East Asia, ထက်ငယ်သော2in East Europe and India each, အကွောငျး 1 in Africa and the Commonwealth of Independent States (CIS) အသီးအသီး.
ကိုလညျးမတားဆီးအဆင်ပြေခုနှစ်တွင် 30 စက္ကန့်ပိုင်း.
ခဏရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကဒီကိုမေး: အသစ်တစ်ခုကိုဝန်ထမ်းအစဉ်အဆက်တစ်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်သင်တက်လွန်ပြီ? ဘယ်လိုနိုင်ပါတယ်, သင်ကိုယ်တိုင် query, ကုမ္ပဏီအတွက်အခြားသူကိုလူတိုင်းသင်မြှင့်တင်ရေးခံထိုက်ကြောင်းပြောပြသည့်အခါသစ်ကို upstart ရာထူးတိုးခဲ့? အသစ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်မှုအဘို့သင့်တွင် track record ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, လိုအပ်သောအထောက်အထားများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီသစ္စာရှိမှုကိုက်ညီဖို့တောင်မှအနီးကပ်မဟုတ်ခဲ့! အဖြေကို၏မရှိခြင်းနှင့်အတူစိတ်ပျက်, သငျသညျစီမံခန့်ခွဲမှုကနေအဖြေကိုရရှိရန်ကြိုးစား ...
Team building activities allow you to improve productivity at work by utilizing creative and critical thinking, trust-building, problem solving, and conflict resolution skills.
တစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ထမ်းစိစစ်ရေးစနစ် Creating သည်ဆယ်ပါးသိကောင်းစရာများ
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာ based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်ဆီသို့ဦးတည်သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုခန့်ထားပြီကြောင်းယူဆ, သင်စနစ်တကျရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်ထုတ်သွားနှင့်သင်အောင်မြင်ရန်လိုအောင်မြင်ရန်ဆုံးဖြတ်တယ်သောအခြိနျကာလဖြစ်ပါသည်.
သင်တစ်ဦး telemarketing ကုန်သည်အကောင့်အကြောင်းကိုစပ်စုရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအမြားဆုံးကုန်သည်အကောင့်ပေးသူထံမှအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. တချို့ကစျေးကွက်ပလက်ဖောင်း၏ဤအမျိုးအစားကိုထောကျပံ့ရန်ဆန္ဒရှိကြဘူး, ဒါပေမဲ့တခြားကုန်သည်အကောင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်. သင်ဤစျေးကွက်မဟာဗျူဟာနှင့်အတူသင်ကူညီထို့နောက်လိုအပ်ရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်နည်းပညာများကိုကုန်သည်အကောင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်သည်ကိုဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွေ့ရှိရန်ကနဦးစုံစမ်းမှုများလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. po Phoning ...
အထူးလောင်းကစားရုံပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် Croupier သင်တန်း
ကျွန်မပို့စကတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပါလျှင်, ငါဆက်ဆက် '' ဆက်သွယ်ရေး၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်းများအတွက်မာနထောင်လွှားယူပါလိမ့်မယ်
Deciding what job to pursue after college entails more brain cells that most activities. Unlike deciding on what car to buy or what clothes to wear, one must give the decision its due because it will effect your happiness and quality of life for the next three to four decades. Most people believe thatacareer in travel nursing is stuff that dreams are made of. For those currently following this career path' most of those who have experienced this lifestyle agree that it i...
သင့်ရဲ့ Post ကို-အငြိမ်းစားစိတ်အားထက်သန်အွန်လိုင်းလိုက်စား
“ဤသည်ကယောဘကို ယူ. ဒါဟာတွန်းထုတ်တဲ့” တစ်တိုင်းပြည်သီချင်းမဟုတ်ပါတဲ့အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်
အလုပ်တစ်ခုဖြတ်အောင်မြင်သောလူတွေကမကြာခဏလုပ်ဖို့ရှိသည်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်. ဤဆောင်းပါးသည်တစ်ဦးဆိုးစှဲထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲအလုပ်စွန့်ခွာဖို့ဘယ်လိုပေါ်အချို့သောအထောက်အကူဖြစ်စေအကြံပေးချက်များပေးသည်. သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်နေသည့်အခါတစ်ဦးတံတားမီးမရှို့မနေပါနဲ့.
Whether he knew it or not, Sam Clemens had quiteabit to say about advertising. ဒီမှာ, among his many notable quotes, youll discover9refreshingly incisive nuggets of wisdom that can help you create stronger, more compelling ads.
entry အဆင့်လက်လီဂျော့ဘ်အကျိုးအမြတ်များသော Careers မှ Lead
Flying in the sky likeafree bird has always beenadream and motivated the Wright Brothers to create this marvelous machine called Aircraft. But to ensure optimum performance, reliability and safety from it, you need to maintain the Aircraft as well.
ဒီအခက်ခဲပြောဆိုမှုများကိုင်ပြီးအပေါ်အကျဉ်းဆောင်းပါးများကိုတစ်စီးရီးတစ်ခုဖြစ်တယ်. ကီခဏ၏အစောပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်, ငါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုဖန်တီးကြောင်းဆက်သွယ်ရေးဖွင့်လှစ်ဖို့နည်းလမ်းတွေအကြံပြု; ကျနော်တို့ကစကားပြောဆိုမှုအဘို့သင့်ရည်ရွယ်ချက် သိ. ၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော; ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှု Toolbox မှစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးများနှင့် Curiosity ကဆက်ပြောသည်. ဒီမှာခေါင်းစဉ် Advocacy ဖြစ်ပါသည်.
Customer Advisory Boards areagreat source of information about your market and your business. Their advice is more valuable than any management consultant's. They provide real world counsel on what you are doing right, what you are doing wrong, and most important -how to stay competitive. နောက်ဆုံးတော့, they're the customer. They're the one's who buy your stuff. Here's how to use your Customer Advisory Board for best results. 1. Make it win-win. As much as they might like ...
ပိုကြီးသော Profits တွေသည်သင်၏အန်ထမ်းဖျော်ဖြေပါ
ယနေ့န်ထမ်း, ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခြားအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍများနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်အထူးသဖြင့်သူတို့အား, အလုပ်မှာရောငျ့ရဲနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို၏အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ်ကော်ပိုရိတ်ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဖျော်ဖြေရေးဆီသို့ပိုပြီးယိမ်းနေကြသည်. ဤသည်ကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ဖြစ်လာသည်အရာကိုပေါ်ပေါက်ရေးထင်ဟပ် - အဖွဲ့ဂိမ်းမှတဆင့်ပျော်ရွှင်န်ထမ်းများစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုတစ်ခု, အထူးအဖြစ်အပျက်ရက်ပေါင်းနှင့်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီသောအခြားလှုပ်ရှားမှုများ. 1. W ကမင်္ဂလာ ...
ဝေးလံခေါင်သီသည့် CCTV စောင့်ကြည့်ဝန်ဆောင်မှုကသင်၏အရေးပါကွန်ယက်ကို devices များကြောင့်စိတ်ငြိမ်သက်ပေး
Remote monitoring allows you to make huge cost savings by reducing or even eliminating the need for on-site security personnel. It also allows you to provide the 24/7 authentication required for Police response to intruder situations.
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အဘယ်အရာကို set up ထားပြီး, နှင့်သင်မည်သို့မှီအောင်လိုက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ဘူး? တူညီသောအာရုံထဲတွင်ရာထူးနှင့်ဖိုင်? သင့် client ပျော်ရွှင် Are? စီးပွားရေးအစီအစဉ်၏တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏အဓိကသက်ဆိုင်သူများရှိပါသလား? ဒီသေချာစေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဝန်ထမ်းများအကြားတသမတ်တည်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်သွယ်ရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဖြစ်တယ်, စီမံကိန်းကိုအဖွဲ့များအတွင်းနှင့် client များနှင့်အတူ.
မူလစာမျက်နှာအခြေခံပြီးစီးပွားရေး ‘ အော့ဖ်လိုင်းစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ
Chitika – မှားသွားတယ်အဘယျသို့?
Dotcomology ‘ အွန်လိုင်းငွေရှာ၏ Written ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ
တစ်ဦးကအကောင်း Start ကိုရန်သင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ဆွေးနွေးချက်တွေဟာ Off Get (အပိုင်း 1)
4 သင်ချက်ချင်းမူလစာမျက်နှာစီးပွားရေးများအတွက်အရှိန်အဟုန် Build မှသုံးပါနိုင်သလားမဟာဗျူဟာများ
Entity မှစ. လုပ်ငန်းအတွက်ရန် 90 နေ့ရက်များ
သင့်ရဲ့ Target ကစျေးကိုသဘောပေါက်နားလည်ခြင်းအင်တာနက်စျေးကွက်သုတေသနအသုံးပြုခြင်း
စီးပွားရေးခုနှစ်တွင်အဆိုပါ Trust မှ Factor မွေးမြူရန်ကဘယ်လို
သငျ့အသငျးတျောကိုကူညီ Teleseminars အသုံးပြုခြင်း Multi-tasking စဉ်သငျသညျနားမထောငျ
မူလစာမျက်နှာစီးပွားရေးစနစ်များ ‘ သူတို့ကိုသင်ကအကြောင်းမူကားအလုပ်လုပ်ပါ
niche ဖို့ဒါမှမဟုတ်မ niche မှ?
Advertising ကြော်ငြာ (1,206)
AdWords အ (98)
Affiliate Marketing ကို (118)
Affiliate Program ကို (207)
API ကို (719)
အခြေခံ. စီးပွားရေး (542)
Bing မှ (277)
တစ်ဦးကစီးပွားရေး Create (23)
ကို Creative (452)
ကို eBay (164)
Marketing ကိုထိုအ Advertising ကြော်ငြာ (58)
Net ကစျေးကွက် (283)
ကိုနှိပ်ပြီး Per ပေးဆောင် (75)
Service ကိုစီးပွားရေး (29)
တစ်ဦးကနေအိမ် Start (97)
Toolkit ကို (17)
Start ရန် Want (88)
web site ကို (604)
မူလစာမျက်နှာ မှစ. လုပ်ငန်းခွင် (278)
က World Wide (94)
Yahoo က (174)
1 / 121234567...နောက်တစ်ခု"နောက်ဆုံး»